Fiatrehana CEPE: notolorana fitaovam-pianarana ireo ankizy kamboty - ewa.mg
News - Fiatrehana CEPE: notolorana fitaovam-pianarana ireo ankizy kamboty
Fikambanana tsara sitrapo tsy
manaiky nitonona anarana eto Toamasina ny hany nitondra fanampiana
ho an’ireo ankizy beazina etsy amin’ny ASPE (Association
sauve-garde pour la protection de l’enfance) etsy Betainomby –
Toamasina suburbain, ny alatsinainy maraina teo. Ankizy
mpianatra 21 mianadahy hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE,
anio talata 15 septambra, ireto notolorana fitaovana ireto.
Raha hiverenana, ankizy tsy misy
mpiahy eny anivon’ny fiarahamonina ary alefan’ny fitsarana
eny amin’ny ivontoerana fitaizana ankizy mania ireo beazina
ao amin’ny ASPE. Tsy nitazam-potsina azy ireo, araka izany, ilay
fikambanana tsara sitrapo fa nitondra izay voatsirambin’ny tanany
ahafahan’ireo ankizy ireo miatrika am-pitoniana CEPE.
Marihina fa miisa 7 428 ny mpianatra voasoratra anarana hiatrika ny
eto Toamasina anio, mitsinjara amin’ny efitranom-panadinana miisa
19. Mpianatra manana fahasembanana amin’ny fahitana ny roa
amin’ireo, ny dimy kosa, manana fahasembanana amin’ny fihainoana sy
ny fitenenana. 7 taona kosa ny zandriny indrindra raha 35 taona ny
L’article Fiatrehana CEPE: notolorana fitaovam-pianarana ireo ankizy kamboty a été récupéré chez Newsmada.
Notafihin’ny lehilahy efatra nirongo basy ny mpivarotra iray teny Anosibe, ny sabotsy tolakandro lasa teo. Voaroba tamin’izany ny vola mitentina dimampolo tapitrisa ariary. Misy lehilahy iray voasambotry ny zandary ahiana ho anisan’ireo mpanafika. Mitohy ny fanadihadiana hitadiavana ny namany. L’article Fanafihana mpivarotra est apparu en premier sur AoRaha.
Harena an-kibon’ny tany: sarihina ny mpampiasa vola amerikanina
Noraisin’ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny harena stratejika (MMRS), Ravokatra Fidiniavo, omaly 6 mey, ny masoivohon’i Etazonia, miasa eto amintsika, SEM Michael Pelletier. Notsorin’ity ambasadaoro ity, fa tsapany ny ezaky ny filoham-pirenena sy ny governemanta amin’ny fanatanterahana ny mangarahara sy ny fanjakana tsara tantana eo amin’ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany. Nampirisihiny ny tsirairay hanohy izany, ho antoka ho an’ny mpandraharaha eto an-toerana sy ireo mpampiasa vola vahiny sarihina ho avy aty Madagasikara.Fiarovana ny tontolo iainanaHo an’ny minisitra Ravokatra Fidiniavo, firenena fitaratra i Etazonia amin’ny lafiny fanjakana tsara tantana sy ny mangarahara. Tsy maintsy mandroso isika, ary hampitomboina ny ezaka mba hanatsara ny endrik’i Madagasikara, hisarihana ny mpampiasa vola vahiny.Nohamafisin’ny masoivoho amerikanina, ny hanohanany ny fiarahamiasan’ny firenena roa tonta, tsy ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany koa fa indrindra ny fiarovana maharitra ny tontolo iainana. Tsiahivina fa efa maharitra 150 taona ny fiaraha-miasan’i Madagasikara sy Etazonia.Njaka A.L’article Harena an-kibon’ny tany: sarihina ny mpampiasa vola amerikanina a été récupéré chez Newsmada.
FIEZAHANA AMIN’NY FIAINANA :: Tovovavy voatefin’ny fahoriana sy ny sedra maro
Vao 14 taona monja rakotonindrina fanjaniaina, saingy efa vory saina tsara, no nindaosin’ny fahafatesana ny rainy. Nangidy ny fisarahana ary nahaketraka azy. Ankoatra io, nandalo sedra maro ihany koa izy kanefa tsy nataony nahakivy izany fa vao mainka aza nampitraka azy izany. Nanefy azy izany ka nahatafita azy ankehitriny. “Hikarakara ny vady aman-janak’ireo voafonja aho”, hoy ny fanambiny. Nanomboka teo amin’ny fahazazany dia efa nisedra fahoriana tsy roa aman-tany Rakotonindrina Fanjaniaina, izay 24 taona ankehitriny. Nindaosin’ny fahafatesana mantsy ny rainy, teo amin’ny faha-14 taonany. Tao anatin’izay folo taona izay dia tsy nitsahatra ny nisedra fahasahiranana maro ny tovovavy. Teo ny saika nialany tamin’ny fianarana. Manginy fosiny ny fahadisoam-panantenana teo amin’ny fiainam-pitiavana. Tsy nampihemotra azy ary niezaka ny nitsambikina izany sedra maro izany anefa izy. Vao mainka aza nampirisika azy hisondrotra hatrany izany. Natontony tao amin’ny sehatry ny fianarana avokoa ny ainy iray manontolo. Nody ventiny izany taty aoriana satria mianatra sady miasa any ivelan’i Madagasikara, any Frantsa, izy ankehitriny. Tsaroany anefa fa isan’ireo sahirana tamin’ny fisafidianana ny asa ataony rahatrizay lehibe ity tovovavy ity, tany am-pianarana. “Baraingo tamiko izany hoe asa hatao rehefa lehibe izany, tany am-pianarana”, hoy Rakotonindrina Fanjaniaina. Mitantara sy mizara ny fiainany sy ny tsy nahakivy azy izy. Tso-piainana sy fitafy Tovovavy tsotra fiaina sy fitafy ary fiteny Rakotonindrina Fanjaniaina. Lehibe tao Mandikanamana Antsirabe izy ary manana mpiray tampo telo. Mitovy amin’ny an’ny rehetra ihany ny fahazazany, be lalao miaraka amin’ireo namany. Tsy mody an-trano ihany koa raha tsy alain’ny Neny na i Dada, indraindray miaraka amin’ny tsora-kazo mihitsy. Nanomboka nahatsapa ny ngidin’ny fiainana izy teo amin’ny faha-14 taonany rehefa nodimandry ny rainy. Na mbola zaza aza dia nisedra ny mafy sahady i Fanjaniaina. Nisy fiantraikany mafy teo amin’ny fianarany io tsy nahateo intsony ny rainy io. “Tamin’ny kilasy fahefatra aho no saika handao sekoly ka tsy hiverina intsony. Nieritreritra ihany anefa aho ka tapa-kevitra fa hanohy hatramin’ny kilasy famaranana mba hanana ny mari-pahaizana Bakalôrea”, hoy izy. Nifanindran-dalana teny ihany koa ny fitiavana.Vao mainka nandrisika azy hilofo hianatra ny fahadisoam-panantenana nahazo azy. Nilofo nianatra Naleony nanatontona ny ainy iray manontolo tamin’ny fianarana noho izany sedra isan-karazany izany. Niditra tamina oniversite iray lehibe tany Antsirabe izy, ny taona 2013. Nanahirana azy indray teo ny nisafidy lalam-piofanana harahiny. Farany dia irony mikasika ny fahandroana sakafo irony no nataony. “Olona tsy mba tia izany aho taloha. Tany amin’ny lisea, ny namana efa mahafantatra daholo izay hanohizany ny fianarany fa ny ahy dia baraingo hatrany. Teo vao nanome soson-kevitra ahy ny zaodahiko, izay mpahandro sakafo, ny mba hanaovako asa toy ny azy”, raha ny fitantaran’ i Fanjaniaina hatrany. Voalazany fa tsy nanenenany ny niroso tamin’io. Malahelo tsy mahatelin-kanina Mbola tohin’ny holatr’ireo fitsapàna nankarary ny fony, dia nitady lalana hisintahana kely an’i Madagasikara mihitsy Rakotonindrina Fanjaniaina. Niova rivotra mba hanadinoana ny hamafin’ny lasa sy hibanjinana ny ho avy ny tovovavy. Nandeha niampita any andafin’ny riaka, any Frantsa izy, roa taona izao, ary tsy mbola niverina teto an-tanindrazana. “Sady mianatra aho aty no miasa. Mipetra-drery ihany koa”, araka ny nambarany. Faly sahirana be ihany ity tovovavy ity raha namboraka ny fiainany any an-tany lavitra any. “Henjana ilay mirotoroto lava manenjika ora. Zara no mba ao an-trano isan’andro. Na izany aza, mahafinaritra ihany”, hoy indray izy. Matetika, tsy mahatelin-kanina izy noho ny alahelo ny aty Madagasikara. Misy fotoana manin-te hody mafy. Ny “internet” no hanalany ny alahelony sy mahavarim­bariana azy, raha ny fanazavany. Voafonja Anisan’ny mankarary ny fon’i Fanjaniaina ny mahita ny mpiara-belona aminy sasany sahirana ara-pivelomana. Amin’ny ankapobeny anefa, hoy izy, ny toe-tsaina no mampahantra. “Ohatra amin’izany ny hakamoana sy ny fanaovana ariary zato am-pandriana. Ny fiankinan-doha amin’ny hafa dia mahatonga ny olona tsy hiezaka ihany koa”, araka ny fahitan’ity tovovavy ity ny fiainan’ny fiarahamonina malagasy. Tsy izany anefa no atao hahakivy. Tanjon’ity tanora tovovavy ity rahateo ny hifanampy sy hifanome tanana amin’ny sahirana. “Ny fanambiko rahatrizay dia ny hikarakara ny vady aman-janak’ireo voafonja. Hanamboatra toerana hahafahan’izy ireny manorina fiainana sy fivelomana ara-dalàna aho”, hoy Rakotonindrina Fanjaniaina, nanamafy ny hambom-pony. L’article FIEZAHANA AMIN’NY FIAINANA :: Tovovavy voatefin’ny fahoriana sy ny sedra maro est apparu en premier sur AoRaha.
Rehefa avy natolotry ny mpanazatra nasionalin’ny Barea, Nicolas Dupuis, ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra, dia nivoaka ny lisitr’ireo mpilalao handrafitra ny ekipam-pirenena malagasy hiatrika fiofanana sy lalao ara-pirahalahiana amin’i Burkina Faso, any Portigaly amin’ ny 5 – 11 oktobra ho avy izao. Mpilalao dimy niatrika ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika « CAN 2019 » natao tany Ejipta no tsy voaantso, ankoatra an’i Faneva Ima Andriatsima, izay efa nandeha nisotro ronono. Isan’ireny Rakotondrazaka Ando, Randrianasolo Dieu Donné (Leda), Ramanjary Théodin, Rakotoharimalala Njiva ary Andriamirado Arohasina na i Dax. Raha ny fanazavana dia « ny tsy fisian’ny sidina hahafahan’izy ireo mamonjy an’i Portigaly sy ny olana ara-bola » no antony tsy niantsoana azy ireo. Saika mpilalao avy any Eoropa, Arabia Saodita ary ireo aty amin’ny fari-dranomasimbe Indiana avokoa ireo telo amby roapolo nantsoina, ankoatra an’i Romain Métanire avy any Etazonia. Mbola tsy tena azo antoka ihany koa anefa ny hahatongavan’ity farany, noho ny olana eo amin’ny sidina avy any Amerika. Isan’ireo mpilalao tafaverina ho ao anatin’ny Barea kosa Rambeloson Toavina sy Randriambololona Zotsara, izay efa samy tao saingy tsy lasa tany Ejipta, noho ny ratra nanjo azy ireo talohan’ny dingan’ny fifanintsanan’ny CAN 2019. Saika nantsoina kosa ireo mpilalao efatra vaovao, sambany handrafitra ny Barea, dia i Sylvio Ouassiero, Bastien Charles Patrick Hery, Alexandre François Ramalingom ary Hakim Djamel Abdallah. Hanazarana azy ireo hiara-hilalao amin’iretsy efa taloha no anton’ity lalao ara-pirahalahiana tokana ho an’ny Barea amin’ity taona ity. L’article Kitra – Lalao ara-pirahalahiana :: Mpilalaon’ny Barea dimy tany Ejipta tsy ho any Portigaly est apparu en premier sur AoRaha.